BBC ICJ 3rd day | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Voice of Myanmar ၈၈ နဲ့ ABSDF ကျောင်းသား ဟောင်း ကိုသူရိန် နဲ့ မေးမြန်းချက်
BBC ICJ 3rd day
This entry was posted on December 14, 2019 at 8:58 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
4 Responses to “BBC ICJ 3rd day”
December 16, 2019 at 3:30 am | Reply
မွတ်ဆလင်ဆိုရင် ဆွမ်းကြီးဝိုင်းလောင်းမယ်ဆိုတဲ့ လူတချို့လည်း သတိသာထားပါ။
ကမ္ဘာ့တရားစီရင်ရေးက သေချာကို စောင့်ကြည့် နေပြီ။
ပြည်တွင်းက ဟိန္ဒူခေါင်းဆောင်တွေကို မေတ္တာရပ်ခံချင်တာက Malcom X ပြောသလို House Slave လို မလုပ်မိဖို့ပါ။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ဟိန္ဒူတွေကို ခင်ဗျားတို့ ကောင်းစားဖို့ရောင်းမစားမိပါစေနဲ့။
အမှန်တရားရဲ့ အင်အားကို လျော့တွက်မိရင်မှားသွားလိမ့်မယ်။
အမှန်အတိုင်းပြောရဲဖို့လိုတယ်။ အချိန်အခါက ခင်ဗျားတို့ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
December 16, 2019 at 3:32 am | Reply
ဆရာ မ ကက်သလင်း ရေ။
ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စ ICJ ကို လှေကြုံ စီးပြီး လိမ်လည် လှည့်ဖျားပြီး ရောက်သွားတာ မဟုတ်တာ အမ သိသလို ကျနော်တို့ အားလုံးလည်း သိပါတယ်။
ICJ ကို ဟိန္ဒူ တွေ ကိုယ်တကယ် အသတ် ခံရတယ် မုဒိန်းကျင့်ခံရတာ တွေ တကယ် ရှိတယ် ဆိုတာတွေ သက်သေ အထောက်အထား ခိုင်တယ် ဆိုရင် တိုင်လို့ရတယ်ဗျ ။ (ကျနော် အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်တာ ကတော့ဟိန္ဒူ တွေလည်း ရိုဟင်ဂျာ နည်းတူ အသတ်အဖြတ်ခံရတယ်မုဒိန်းကျင့်ခံရတယ်ဆိုတာပါပဲ)
ရခိုင် က ဟိန္ဒူ နဲ့ ရိုဟင်ဂျာ တွေ ဟာ ခွဲခြားဆက်ဆံမှု့ အောက်မှာ ငတ်တလှည့် ပြတ်တလှည့် ညီအကိုလို နေလာတာ ရာစုနှစ် ပေါင်း မနည်းပါဘူး။
ရခိုင်က ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်တွေ က နီးရာ ဓါး ကြောက်ပြီး မလုပ်ချင် လုပ်ချင် နဲ့ တချို့ ကိစ္စ တွေ မှာ ပါဝင် ပတ်သတ် ခဲ့ရတာတွေကို ဘယ်ရိုဟင်ဂျာက မှ အပြစ်မတင်ဘူး၊။
အထူးသဖြင့် ပြည်မ က အန္ဒိယ နွယ်ဖွား စီးပွား ရေး သမား၊ နိုင်ငံရေး သမား နဲ့ တချို့ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် ဆိုသူ တွေ ဟာ သူတို့အကျိုး စီးပွား တွေ အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်က လူမျိုး မတူ ဘာသာတူတဲ့ ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်တွေ ကိစ္စ ကို အသုံးချပြီး သခင်အကြိုက် ရိုဟင်ဂျာကို ဘင်္ဂလီ ခေါ်ရတာနဲ့ သခင်တွေ သင်ပေးတဲ့ အတိုင်း ရိုဟင်ဂျာ မကောင်းကြောင်းတွေ သတင်း စာတွေ တီဗီ တွေ မှာ ဝါဒ ဖြန့်နေတာ တွေကို ကျုပ်တို့ မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။
ကိုယ်ပိုင် ဦးဏှောက် ဆင်ခြင် တရားမရှိပဲ သူများ က ခိုင်းတိုင်း လိုက် မက မိဖို့ သတိချပ်သင့်ပါတယ်။ Racists တွေ ရဲ့ သမိုင်းမှာ ဘယ် –ုလား ကို မှ လူရာ မသွင်းခဲ့ပဲ အမြဲ နှိမ်ခဲ့ တာကို အခု အသုံးချခံ တစု မမေ့သင့်ပါဘူး။
ထပ်ပြောမယ် ဟိန္ဒူ တွေ အသတ်ခံရတာ မတရားကျင့်ခံရတာ ကို UN ကို အကြောင်းကြားပါ။
ဘင်္ဂလား မှာ UN အဖွဲ့ အစည်းတွေ ရှိတယ်၊ ဘင်္ဂလား ဟိန္ဒူ အသိုင်းအဝိုင်း လည်း ပေါက်ရောက်တယ်၊ လိုအပ်ရင် ဟိုမှာ ရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ တွေ ဆီကလည်း အကူအညီတောင်းနိုင်တယ်။ ARSA ဆိုတဲ့ မိစ္ဆာ ကောင် တွေ သတ်တာ ခိုင်လုံရင် ဒင်းတို့ကိုလည်း တရားဥပဒေ နဲ့ အညီ အပြစ်ပေးရမှာပဲ။ အဓိက က ရှေ့ထွက်ပြီး တိုင်ဖို့ပဲ လိုတာပါ။
ကျုပ် က လူသားပဲ သိတယ်။
ကျုပ် ဘာသာ လူမျိုး အသားအရောင် ခွဲခြားတာကို ဆန့်ကျင်သလို ကိုယ်တဘို့တည်း အတွက် သူများကို ချနင်းပြီး အမြတ်ထုတ်တာ ကိုလည်း ရှုတ်ချတယ်။
မ ကတ်သလင်းသိန်း နားလည်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
ဦးမောင် ဆီ က idea ယူထားတာပါ။ ကျေးဇူးပါ ဦးမောင်
December 16, 2019 at 3:34 am | Reply
December 14 at 5:11 PM ·
သူ ဘာလို့ မပြောခဲ့တာလဲ
မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံ ဓာတ်ပုံတွေ ဖန်တည်းပေးခဲ့တယ်
မင်းတို့ဟိန္ဒူခေါင်းဆောင်တယောက်ကဆို ICJ ရုံးရှေ့အထိ
သွားပြီး မဟုတ်မမှန်စကားတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်
ဒီကြားထဲက မင်းတို့ဟိန္ဒူတွေအတွက် ဘယ်သူက ဘာလုပ်
မင်းတို့နဲ့ ထိုက်တန်တာ မင်းတို့ ရမှာပဲလေ
Ro Mujibu Rahaman
“ဟိန္ဒူသောင်းဂဏန်းမှာမှ ၁၀၀၀ ကျော်က အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်တယ်။ ဟိန္ဒူတွေအယောက် ၁၀၀ ကျော် အသတ်ခံ ရပါတယ်။ ၄၄၄ ယောက်က တခြားနိုင်ငံကို ရောက်နေတယ်။ ဒါကိုကျတော့ ဂျီနိုဆိုက် (လူမျိုးတုန်းသတ် ဖြတ်မှု)လို့ ပြောလို့ မရဘူးလား။ ဘာလို့ ကျမတို့ ဟိန္ဒူတွေဖက်က အသံမထွက်ပေးနိုင်ကြတာလဲ။ “
ဒေါ်ကက်သလင်းသိန်း(အင်ကြင်းမေ အမျိုးသမီးကွန်ရက်) ICJဂယက်နဲ့ မြန်မာပြည်အနာဂတ်”?ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဒီဗွီဘီ ဒီဘိတ် အစီအစဉ်ကို ၁၅.၁၂.၂၀၁၉(မနက်ဖြန် – တနင်္ဂနွေ) ည ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် စောင့်မျှော် ကြည့်ရှုပါ။
December 16, 2019 at 3:35 am | Reply
Pyae Phyo တော်တော်ရီစရာကောင်းတယ် ။ ဘူးသီးသီးမှ အရီးတော်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုး ။
Khin Mg Latt
ဖြစ်တုန်းကတော့ အဘ ဘောကိုပြေးစုတ်တယ် အခုမှ Sသံထွက်တော့ ဘာလုပ်လို့ရမာလည်းကိုယ်ကိုတိုင်အမှန်တရားကိုမျက်ကွယ်ပြုခဲ့ပီမှ ဒါပေမဲ့လုပ်လို့တော့ရပါသေးတယ် ICC ရက်ချိန်းမပြည်ခင်မာ အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးတယ်ဆိုရင်တော့ ရိုဟင်ဂျာအယောင်ဆောင်ပီးမီးလိုက်ရှုံ့တဲ့ဟင်ဒီဘာသာဝင်ရယ် သေဆုံးစရင်းရယ် ဟိုဘက်ကိုရောက်နေတဲ့စရင်းတွေကိုမှမှန်ကန်ကန်ရေးပီးတင်ပေးလိုက်ပါ အာဆာသတ်တယ်လို့ရေးတင်ရင်တော့ အဘ ဘောစုတ်တာကိုသူတို့သိသွားမယ်